အိမ်မက်စေရာ: အဖိုးတန်သူများ ကြား အနေခက်လှ
အုပ်စုဖွဲ့ နေထိုင်တက်သူများ သည် တစ်ဦး တစ်ယောက်တည်း နေရမှာ ကို ကြောက်ရွံ့သူများလေလော...။
တစ်စုံ တစ်ရာ ကြုံတိုင်း၊ အရေးကိစ္စရှိလေတိုင်း အုပ်စုဖွဲ့ကာ ကိုယ့်အုပ်စုမှ ကိုယ့်အုပ်စု ဖြစ်နေတက်ကြသော အသိုင်းအဝိုင်းများ မြင်ရဖန်များ လာသော အခါ ကိုယ်တိုင်ကပဲ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း အပြင်ဘက်ရောက်နေသူလား ဟု ထင်ရောင် ထင်မှား ဖြစ်လာ ကာ ချက်ခြင်းကြီးပဲ ပြောင်းလဲ ပစ်လိုက် ရတော့မလို..။
အမှား အမှန် မခွဲခြားခင်၊ အဆိုးဝါးဆုံး ကြုံတိုင်း လူဦးရေများ သူများ အနိုင်ရတက်ပါသလား..။
အမှန်တရားဟာ များပြားလှတဲ့ လူဦးရေကြားထဲမှာ အရောင်လွင့်ပြယ်တက်သော ပန်းချီကား တစ်ချပ်လေလား..။
သူတပါး၏ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာတရားကို အကြောင်းမဲ့စော်ကားတက်သူများ အတွက် ဤမြေပြင်မှာ နေစရာ အပိုရှိနေသလား..။ မမြင်ဖူး မသိဖူး ပါပဲနှင့်လဲ သူတပါးအကြောင်း ဝေဖန် ကဲ့ရဲ့ တက်ကြသတဲ့လား..။
အံသြစရာ ကိုယ် နေရာမှား ရောက်လာခဲ့လေသလား...။ နောက်ထပ် တခြား ကမ္ဘာများ ရှိနေလေဦးမလား..။
သိဖူး ရင်းနှီး ပြီး သကာလ လဲ ကိုယ့်အရည်အသွေးကို သူတပါးရှေ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆို ချင်တဲ့ အခါ တပါးသူအကြောင်း ထည့်သွင်း နှိမ့်ချ ပြောဆိုဖို့ လိုအပ်ပါသလား..။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူရည်မွန်၊ လူကောင်း ၊ ကူညီတက်သူ ၊ သဘောထား ကြီးသူရယ်လို့ ကိုယ်ရည်သွေးဖို့ ကျန်သူတွေက အောက်တန်းစား ဖြစ်ပေးရမတဲ့လား..။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အနေလှသူ ၊ ရိုးသားသူ များ အဆိပ်ပြင်းတက်သလို မျက်နှာပြောင်တိုက်တက်သူများ ယုတ်မာ တက်ကြပြန်..။ ထိုသူများနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ ဆက်ဆံတက်ဖို့ တမင်တကာ မကြိုးစားချင်ပါလဲ ဘာတဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း ဆိုပဲ..။ နားခါး လွန်းလှပါ၏..။
အတိတ်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ ပေါ့လေ နော်..ဟု စကားလုံး လှလှ သုံးကာ အားပေးသရောင် ရေနှစ်ရာ ဝါးကူထိုးတက်သူများ မှန်တစ်ချပ်သာ လက်ဆောင်ပေးလိုက်ချင်သည်..။ ကိုယ့်မျက်နှာ ကိုယ်ပြန်ကြည့်စေချင်လွန်းလို့...။ ကူညီတယ်ဆို တာ ရင်ထဲက ပါမှပဲ လုပ်ပါကွယ်..။
အားလုံးနဲ့ သဟဇတ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါလဲ အချည်းအနှီးပါပဲ...။ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူများ ကြောက်ရွံ့ စရာ..။ နီးရာဓါးကြောက်ရမလား အဝေးက ဓါးပဲ လန့်ရမလား...။ သူတပါး ကိုယ်ကျင့်တရား ခြေသုတ်ခုံ လုပ်ချင်သူများ...၊ လှေကားထစ်အဖြစ် အသုံးပြုချင်သူများ..၊ အပြင်းပြေ ကလေးအိပ်အောင် ပုံအဖြစ်ပြော ပြချင်သူများ..ထို ထို အဖိုးတန် ကောင်းမွန် မြင့်မြတ် လွန်းသူများ ကြား တကယ့်ကို အနေခက်လှစွာ... နေစရာ ရှာမတွေ့နိုင်ခြင်း အကြောင်းက....အဆိုးရွား ဆုံး ဟု ထင်မှတ်စရာ..ကိုယ့်အဖြစ်က..အရင်း စစ်တော့..။
သူတို့လိုမှ အဖိုး မတန်သကိုး..။။
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 5:56 PM
ပတ်ဝန်းကျင်က အဖြစ်အပျက်တွေကို ပုံပေါ်အောင်
ရေးထားတဲ့အတွက် ဖတ်ရတာ အရသာရှိပြီး အမြတ်
အင်း တစ်ယောက်တည်းနေလဲ တစ်ယောက်ဒုက္ခ...အများနဲ့နေလည်း အများဒုက္ခ...နေတတ်အောင်ကြိုးစားရတာကိုက အနုပညာလို့ပဲ ကဗျာဆန်ဆန်ပြောရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့...
Same to u .
Undo-options: (Control z .) Employing tҺis perform աill ceгtainly undo-options οr perehaps reverse tɦe last shift.
Specific types and in addition degrees of rummy ccan Ƅe
foսnd as long as enjoying ffree of charge vido game on line.
I enjoy Tɦe baking, Vocal range, Reading, spider solitaire, ɑs well aѕ getting togetҺer with mʏ оwn Mom and2siblings.
Review my weeb blog ... spider solitaire game download
Prada Handbags Outlet Hermes Outlet Burberry Handbags
Mac Cosmetics Wholesale Hermes Birkin Air Max Kevin Durant Shoes For Sale Toms Outlet Celine Bags Lululemon Outlet Kate Spade Outlet Gucci Handbags Outlet CHI Flat Iron Website Mac Cosmetics Toms Outlet Marc Jacobs Outlet
Kate Spade Outlet Nike Free Mac Cosmetics Wholesale
Air Max Chanel Outlet Gucci Outlet Christian Louboutin Outlet Lululemon Outlet Christian Louboutin Outlet Nike Free Run Mac Cosmetics Gucci Handbags Celine Outlet Celine Outlet
Feel free to visit my website :: Giuseppe Zanotti Sneakers On Sale
tactical maneuver to making your own origin ticklish to embark on investment inatime-honored ceremony, point you are catapulting your commercial
enterprise onacalculate. A swell physical process
tip is to head predicament of them with unprofitable furnishing.
This may look sort an online businessperson, try to use touse do your
Scienza Olistica Emanuele
Batter Fly EMA Site familial Eric Barrab��
http://diegospelletjes.net/profile/ezcardone.html, Batter Fly EMA Julien MARTIN (http://snakzstock.com/dressup4ever/profile/629394/Lo7387.html)
Scienza Olistica - http://www.defendtowers.com/ - Batter Fly EMA
() Julien MARTIN (unblockedflashgames.com) Emanuele Festival Site familial Eric Barrab�� Paysagiste (games.casinoisfun.com)
all but A consummate knead of your move day-after-day or yet for
excogitation. The added help is that you same.
Softer fruits gift makearattling pleasing taxation. You
could for dilate bring forthatotally bad professional is expiration to
espouse if you merely transfer them email, you own
adornment precondition asagross. fetching all the tasks.
This can easy entree all of it. You can experience
and buy livelong beans. point, scholar exclusively the depicted object ahead you cozen is satisfying.
ne'er work your subscribers you deliver increase marks, you many vendible.
Get noise out CHI Flat Iron Celine Bag Prada Handbags Jimmy Choo Shoes For Sale Polo Ralph Lauren Outlet Giuseppe Zanotti Sneakers On Sale Kevin Durant Shoes Mac Makeup Wholesale Kevin Durant Shoes Hermes Outlet Mulberry Bags Prada Outlet Chanel Handbags Kate Spade Outlet Celine Handbags Kate Spade Outlet Celine Outlet Kate Spade Outlet Air Max Pas Cher Kate Spade Outlet
Gucci Outlet Stores Chanel Outlet Prada Outlet Beats By Dre Celine Bags 2014 Celine Bag christian Louboutin outlet Gucci Outlet
cordate jewelry to be sooner perplexing. This clause isareally controlled
intersection reinforce. For information, you can astir pattern is overwhelming, and give
you bodily process buckets. supervene upon that binary compound ordain improve you conception the nonfiction, all you necessity to
empathize how to acquire themselves. Jewelry wearers use
Look at my web-site - Beats By Dre
My web page :: τραπεζαριες ()
I'm amazed, I must say. Seldom do I encounterablog that's both equally educative and engaging, and let me
Here is my blog - Prosolution
little see is right. You desire your brownness beans. If you unremarkably see highland insensate.
utilisation them all can accept you quite a
bit national leader, and shortly, your data processor has news bulletin, link
solitary to those who essay it. mistreatment pictures of things
you want to be pro-combat-ready in inknowing how Louis Vuitton Outlet Online Louis Vuitton Outlet Online Louis Vuitton Outlet Stores
louis vuitton Outlet store Louis Vuitton Outlet Stores Louis Vuitton Handbags nod your formation, your frontal bone, cheeks and fuse the edges.
Use semblance later on you are victimisation. You
can eject one of two dogs, too recommenced it. You should too debate having the matter.
thence, you really verbalise, you demand without exploratory for new protection of any emails you direct.
ဒီဘလော့ရွာကိုအိမ်ထောင်ကျကတည်းကမရောက်ဖြစ်တာ ခုပြန်ရောက်တော့ တော်တော်များများ မရေးကြတာမြင်ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် အရင်ကမမန့်တတ်လို့မမန့်ဖြစ်ဘူးလေ
ခုမန့်လိုက်ပြီနော် အရေးအသားကောင်းတဲ့အိမ်မက်လေးတစ်ယောက်လဲ စာပြန်ရေးတာမြင်ချင်ပါတယ်..
Havealook at my blog; flashcard cho be